Poise Mwenje - Dhizaini magazini
Mwenje Chitarisiko chechiratidziro chePoise, mwenje wepatafura wakagadzirwa naRobert Dabi weUnform.Studio inoshanduka pakati peiyo yakasimba uye ine simba uye yakakura kana diki mamiriro. Zvichienderana nechikamu chiri pakati pete yayo yakavhenekerwa ruoko ruoko ruchimubata, kupindirana kana tangent mutsara wedenderedzwa kunoitika. Kana yaiswa pane yakakwirira pasherufu, iyo mhete yaigona kuvhara shefu; kana nekureresa mhete, yaigona kubata madziro akapoterera. Chinangwa chekushandurwa uku kuita kuti muridzi abatanidzwe uye atambe pamwe nemwenje wechiedza zvakaenzana nezvimwe zvinhu zvakatenderedza.
Zita rechirongwa : Poise, Vagadziri zita : Dabi Robert, Izita remutengi : unform.
Zvigadzirwa zvemwenje uye zvigadzirwa zvemwenje
Mwenje Dabi Robert Poise